नारी, जसको अनुहारमा कुनै रिस, राग, आवेग देखिएन - Suvham News
नारी, जसको अनुहारमा कुनै रिस, राग, आवेग देखिएन
सन्चार माध्यममा छाउने नारीहरू मध्ये मेरो नजरले दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । एक कित्तामा छिन ‘पुर्व युवराज्ञी ‘ भनेर चिनाईने हिमानी शाह ! क्यामेरामा पर्दा मुसुक्क हाँस्ने, संधै शालिन पहिरनमा देखिने र अत्यन्त भद्र किसिमले प्रस्तुत हुने उनको बानि मेरो मनमै बसेको छ । ढिलो चाँडो नेपालको रानी हुने प्रतिक्षामा थिईन तर गणतन्त्र आयो । उनको रानी बन्ने बाटो बन्द भयो ! यो त आकाश नै खसेको हो ! संसारमा कति जनालाई यस्तो दुर्भाग्य आईपर्ला ? तर पनि उनको अनुहारमा कुनै रिस, राग, आवेग देखिएन । सन्चार माध्यममा देखिंदा यस्तो लाग्छ उनको जीवनमा त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना नै भएको छैन । श्रीमान् अर्कै युवतीसंग सल्किएको कुरा पनि आए तर उनि बिचलित देखिईनन ! सायद अहिले फेरी पारिवारिक जीवन ‘ट्रयाक’ मा ल्याएकी छिन । उनी त जन्मले नेपाली पनि होइनन । छुट्टै देशमा जन्मिएर अर्को देशको अर्कै परिवारमा विवाहको केहि समयमै यसरी समाहित भएकी छिन कि बरु पारस शाह भन्दा उनको लोकप्रियता बढी छ नेपालमा ! बहुसंख्यक नारी भित्र पाईने यस्तै गुणले नै संसार धानेको हो !
मेरो नजरमा परेका अर्को कित्ताको नारीको बारेमा कुरा गरिसक्नु छैन ! बेला बेलामा लेख आउँछ त्यस धारबाट ! लेखको अक्षर अक्षरमा खुकुरी लिएर ‘ एउटा न एउटा पुरुष काटेरै छोड्छु’ भनेर उफ़्रिएको देख्छु ! आफ्नो उमेर आफै ढाँटेर, संधै कल्कलाउँदो बन्ने प्रयास गर्छन, आफु उमेर ढाँट्न बाध्य भएकोमा पुरुषलाई सराप्छन र सहि बोल्न नसिकाएको भनेर बाउ आमा धिक्कार्छन ! यी तिनै कित्ताका नारी हुन जसले रातदिन ‘कोरा समानता’ को कुरा गर्छन । पुरुषले माथि कपडा नलगाए पनि हुने हामी नारीले किन लगाउनु पर्ने भनेर उदाङ्गै दौडिने नारीहरू पनि यहि कित्तामा पर्छन ! बच्चा जन्माउन नारी पुरुष दुवैको भूमिका हुन्छ, दुध चै किन नारीले मात्र खुवाउनुपर्ने ? भनेर कुनै दिन बग्रेल्ती लेख छापिए पनि अनौठो नमाने हुन्छ ! ” न तेरो र न मेरो ” यिनका निम्ति ‘समानता’ हो ! बिहे पछि किन पुरुषको घर जानुपर्ने भनेर उफ्रिन्छन । श्रीमान र श्रीमती दुवै तिर उमेर पुगेका बाउ आमालाई छोडेर छुट्टै बस्नु यिनको ‘समानता’ को आदर्श रुप हो । तर यो कित्तामा थोरै संख्याका नारीहरू भेटिञ्छन र त संसार चलेको छ !
योगी विकासानन्दको एउटा प्रवचनमा यी दुवै नारी समेटिने कुरा गरेका थिए ! रक्सि खाएर होहल्ला गर्ने पुरुषको श्रीमतीसंग दुई वटा विकल्प हुन्छ – एउटा श्रीमानलाई पनि नशाबाट छुटाएर आफु जस्तै बनाउने । अर्को ‘तैले खान हुने, मैले खान नहुने ?’ भन्दै आफु पनि त्यस्तै गरी फ़िट्टान धोक्ने र झ्याली पिट्ने ! दुवै समानता नै हो ! कुन समानता ठिक होला ? सायद हिमानी शाहको कित्ताका नारीहरूले पहिलो किसिमको समानता रोज्दा हुन् !
समाजमा त्यस्ता शालीन नारीहरूको संख्या बढिरहोस र संसार चिर कालसम्म चलिरहोस ! नारी दिवसको शुभकामना !
Sushil Gautam facebook
Prevदेब्रे घुँडा र दाहिने घुँडा छुट्याउन नै नसक्ने, एउटा खुट्टा बिरामी छ अर्कोको उपचार गर्ने ? यो तहको चिकित्सा सेवाले कहाँ पु-याउँछ ?
Nextअन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अबसर मा परिवर्तन समाज नेपाल अध्यक्ष्य शान्ता कुमारी गुरुङ लीयको अन्तर्वाता भिडीयो